Zvitsuwa zveCanary 'zvakachengeteka' anodaro gurukota sezvo vanhu zviuru zvishanu vanotiza kuputika kweLa Palma
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Spain Kuputsa Nhau » Zvitsuwa zveCanary 'zvakachengeteka' anodaro gurukota sezvo vanhu zviuru zvishanu vanotiza kuputika kweLa Palma
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
"Hapana zvirambidzo pakuenda kuchitsuwa ichi ... zvinopesana, tiri kuendesa ruzivo kuti vashanyi vazive kuti vanogona kuenda kuchitsuwa uye vanakirwe nechimwe chinhu chisina kujairika, vazvionere vega," Gurukota rezvekushanya kuSpain Reyes Maroto akadaro.
Kuputika kwemakomo kweLa Palma kwakaparadza dzimba dzinosvika makumi maviri nekumanikidza kuburitswa kwevanhu zviuru zvishanu.
Parizvino, vakuru vakuru vakabudirira kubvisa vanhu vanosvika zviuru zvishanu kubva kumisha yakati wandei muEl Paso neLos Llanos de Aridane.
Sekureva kweGurukota reSpanish Tourism Reyes Maroto, iyo Canary Islands yakachengeteka kushanyira uye kuputika kwegomo kune "inoshamisa show".
Kuputika kwemakomo pachitsuwa cheCanary Islands cheLa Palme kwakaparadza dzimba dzinosvika zana uye kwakamanikidza kuburitswa kwevanhu zviuru zvishanu, nemazana mamwe ari panjodzi kubva mukuyerera kwemafashama ari kukura, ayo anotarisirwa zvakare kukonzera gasi rine chepfu kana asvika pagungwa. .
Meya weEl Paso, La Palma, Sergio Rodriguez Fernandez akanyevera kuti musha uri pedyo weLos Llanos de Aridane uri panjodzi, nevakuru vakuru "vachiona nzira yedutu" zvichitevera kuputika kwegomo musi weSvondo masikati.
Mifananidzo yakatorwa mushure mekuputika kwakaratidza mabota achibhururuka mazana emamita mumhepo, ichitumira marara anoputika muAtlantic Ocean uye kumatunhu ane vanhu veLa Palma, chikamu che Spanish Canary Islands.
Vakuru vakabudirira kubvisa vanhu vanosvika zviuru zvishanu kubva kumisha yakati wandei muEl Paso neLos Llanos de Aridane. Ipo mabota achiri kupararira, hapasisina kubuda kuri kurongwa parizvino. Hapana kukuvara kana kufa kwakaziviswa, nyanzvi yezvemakomo Nemesio Perez achiti hapana chinotarisirwa, chero vanhu vachizvibata zvine hungwaru.
Vafambi vanosvika mazana matatu nemakumi matatu vakabviswa panzvimbo yekutandarira muLa Palma zvichitevera kuputika uku ndokuendeswa kuchitsuwa chiri pedyo cheTenerife nechikepe neMuvhuro, mutauriri wevashandi vezvikepe Fred Olsen akadaro.
Vamwe vashanyi zana nemakumi masere vanogona kubviswa muLa Palma mumashure mezuva, mutauriri akawedzera.